Dhagayso BBC Puntland iyo Somaliland oo is eedeeyay – Radio Daljir
Luulyo 18, 2016 3:15 g 0
Dhahar, 19, July – 2016 Xaaladda goobihii saaka dagaalku ka dhacay ayaa lagusoo waramayaa inay haatan dagantahay islamarkaana aysan jirin waxa iska hor imaad ah oo socda iminka.
Khasaaro kala duwan ayaa jira in kastoo labada dhinaca Puntland iyo Somaliland iska fogaynayaa khasaaro soo gaaray.
Goordhaweyd waxaa laanta Afka Somaliga ee BBC la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland, Maxamud Xasan Soocadde, wuxuuna sheegay in mallayshiyaad laga soo abaaburay Waqooyi Galbeed Somalia kusoo duuleen deegaano ay ka taliyaan siduu hadalka u dhigay.
Soocade, ayaa meesha kasaaray inay jiraan wax khasaaro ah oo soo gaaray kuwaasoo maamulka Somaliland sheegeen inay gaysteen, isagoo xusay inuu jiro Xildhibaan fasax ku joogay Dhahar oo afduub loo kaxaystay.
Dhinaca Wasiirka Gashaandhiga Somaliland Axmad Xaaji Cali Cadami ayaa isna BBC-da u sheegay inay baabuur ka gubeen maamulka Puntland islamarkaana gacanta ku hayaan ilaa 6 maxbuus, wuxuuna ku eedeeyay inay carqaladayn toos ah ku hayaan doorashadooda.
Goob joogayaal aan la xiriirnay ayaa noo sheegay inay jiraan abaabul ciidan oo kasocda gobolka Sanaag, waxayna cabsi ka muujiyeen isku dhac dhexmara labada dhinac caawa.
Diiwaanaka Wararka Daljir.